Asia Coronavirus COVID-19 Mmelite: Mmachibido Njem, Ọnọdụ Ugbu A
Home » Nchedo njem na Mberede » Asia Coronavirus COVID-19 Mmelite: Mmachibido Njem, Ọnọdụ Ugbu A
Mmelite Asia na Coronavirus COVID-19: Mmachibido Njem na Ọnọdụ Ugbu A
Na mbido Jenụwarị 2020, a hụrụ ụyọkọ nke ọrịa oyi baa nke amaghị ihe kpatara ya na Wuhan City, Hubei, China. Ihe si na ya pụta coronavirus (COVID-19 ebutewo ihe karịrị 95,000 nkwenye zuru ụwa ọnụ. N'ime ikpe ndị a gosipụtara, ọnụ ọgụgụ "agbakewo" fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 54,000. Kemgbe etiti ọnwa Febụwarị, ọnụọgụ nke mgbake arịwanye elu (ihe karịrị 50%), ebe ọhụụ ndị akọwapụtara ọhụrụ na-ebelata nwayọ na ọnụ ọgụgụ. Emeela Asia Coronavirus COVID-19 mmelite site na Destination Asia (DA).
N'ime njem iri na otu nke DA na-enyocha, ọ nweghị ikpe akwadoro nke COVID-11 na Myanmar, Laos, ma ọ bụ agwaetiti Bali. Thailand, Vietnam, Cambodia, na Malaysia edekọtara ihe na-erughị 19 nke nkwenye - nke n'ime ha, ndị mmadụ 110 agbakeela. Lọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa na United States (CDC) na February 70, wepụrụ Vietnam site na ndepụta nke ebe ndị na-enweghị ike ịnyefe obodo nke COVID-27 na-ekwu maka ihe niile Vietnam mere megide ọrịa ahụ.
Singapore na Hong Kong edeela naanị ihe karịrị 100 ikpe, na Japan nso 330. Ndụmọdụ na Asia Coronavirus COVID-19 na-egosi ịtụle njem niile na-enweghị isi na China ruo Mee. Maka ebe ndị ọzọ niile, DA na-ejikwa ntinye akwụkwọ dị ka ọ dị na mbụ. Ndụ na ebe ndị a na-aga n'ihu dị ka ihe nkịtị, ma ewezuga China, ịgagharị gburugburu mpaghara ahụ ka dị mfe.
Ewezuga China, atụmatụ njem niile nwere ike ịga n'ihu dịka o kwesịrị. Enweghị ndị mmachi njem site n'aka ndị WHO ma ọ bụ gọọmentị mba dị n'etiti ebe ndị ọzọ na pọtụfoliyo anyị. Kama ịkagbu njem ọ bụla emere atụmatụ, DA na-atụ aro ịhazi oge.
Answerza ajụjụ gbasara COVID-19
Maka ozi na ndụmọdụ nchedo kachasị ọhụrụ, ndị WHO na-enye ọtụtụ vidiyo na-enye ihe ọmụma na ọkwa a na-ebipụta iji budata Ebe a.
WHO na-enye kwa akụkọ ọnọdụ kwa ụbọchị yana ọnụ ọgụgụ akọwapụtara nke ọma na nkesa nke COVID-19. Nke kachasị ọhụrụ (4 Machị) enwere ike ịlele Ebe a.
Nwelite na mgbochi njem izugbe
An Asia Coronavirus COVID-19 melite ugbu a mgbochi mmachibido metụtara mba gafere DA netwọk e chịkọtara na ọtụtụ ịtụkwasị ókè na njem si China.
Ndị njem niile n'agbanyeghị mba si China na-abanye na Hong Kong chọrọ ịbanye na mgbochi nke iwu maka ụbọchị 14. Nke a metụtakwara ndị njem gara Emilia-Romagna, Lombardy ma ọ bụ Veneto na Italy ma ọ bụ Iran na ụbọchị 14 gara aga. A gaghị ekwe ka ndị njem gara South Korea n'ime ụbọchị 14 nke mbata na Hong Kong. Onye isi oche ahụ ekwuputala nkwụsị nke ọrụ mbata na Kai Tak Cruise Terminal na Ocean Terminal, yabụ enweghị ụgbọ mmiri a ga-anabata ruo mgbe ọkwa ọzọ. N’ebe a, emechiela uzo niile, ewezuga ebe nyocha nke Shenzhen Bay, Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge na ọdụ ụgbọ elu mba ofesi. Ka ọ dị ugbu a, Hong Kong Disneyland, Ocean Park, Ngong Ping 360 Cable Car, na Jumbo floating Restaurant ka emechiri ruo mgbe ọkwa ọzọ.
MARA: World Rugby ekwuputala ịhazigharị Cathay Pacific / HSBC Hong Kong Sevens. Asọmpi a, nke emere na mbụ n'April 3-5, ga-egwu ugbu a na Hong Kong Stadium site na 16-18 October, 2020.
Ndị ụlọ ọrụ Sabah na Sarawak amachiela ụgbọ elu niile si China. Iwu mmachibido iwu a abụghị site na ala Malaysia. Sarawak steeti kwuputakwara na onye ọ bụla batara Sarawak nke gara Singapore ga-anọrọ onwe ya iche iche ụbọchị 14. Ndị mba ọzọ si mba ọzọ gara leta Daegu City ma ọ bụ Cheongdo County na North Gyeonsang Province na Republic of Korea, n'ime ụbọchị 14 nke mbata na Malaysia (gụnyere Sarawak) agaghị ekwe ka nbanye. Njikwa KLCC chọrọ ndị ọbịa niile gụnyere ụmụaka na ụmụ ọhụrụ iji mezue ụdị nkwupụta Ahụike tupu ị gaa Skybridge na Kuala Lumpur (bido na 29 February) ruo oge ọzọ.
Ndị mba ọzọ bịara leta mpaghara Hubei na / ma ọ bụ Zhejiang na China; ma ọ bụ Daegu City ma ọ bụ Cheongdo County na North Gyeonsang Province na Republic of Korea, n'ime ụbọchị 14 nke mbata na Japan, agaghị ekwe ka nbanye. Maka mmelite kachasị ọhụrụ na ebe a na-emechi ugbu a na Japan, biko kpọtụrụ onye na-ahụ maka ndụmọdụ Asia Japan.
Gọọmentị Indonesian kwupụtara mmachibido iwu na ụgbọ elu na-esi na mba China site na 5 February gaa n'ihu ma ghara ikwe ka ndị ọbịa nọrọ na China n'oge 14 gara aga ịbanye ma ọ bụ ịga njem. A kwụsịtụrụ iwu enweghị visa maka ụmụ amaala China nwa oge.
Ndị ọrụ ụgbọelu nke Vietnam akwụsịla ụgbọ elu niile dị na mba China na Vietnam. Ndị njem na ụgbọ elu si mba nwere akụkọ gbasara COVID-19 ga-enyerịrị nkwupụta ahụike mgbe ha na-abanye Vietnam. Ọtụtụ ọnụ ụzọ dị n'etiti Vietnam na China na mpaghara ugwu nke Lang Son ka emechiri. Ọtụtụ ụgbọ elu kwụsịtụrụ oge ụgbọ elu dị na South Korea na Vietnam. A ga-ajụ ndị mba ọzọ si mba ọzọ bịa leta Daegu City ma ọ bụ Cheongdo County na North Gyeonsang Province na Republic of Korea n'ime ụbọchị iri na anọ.
Smụ amaala mba ọzọ gara leta China, Iran, ugwu Italy ma ọ bụ South Korea, n'ime ụbọchị 14 nke mbata na Singapore agaghị anabata ma ọ bụ gafere.
Lao ụgbọ elu kwụsịtụrụ nwa oge na China. Gọọmentị Lao akwụsịla ịbịara visa ndị njem na ebe nyocha dị n'akụkụ China.
Nkwupụta nke Mịnịstrị na-ahụ maka ahụike na Thailand wepụtara na 3 Maachị kpatara ọgba aghara. Nkwupụta ahụ kwuru na Germany, France, Italy, Iran, China, Taiwan, Macau, Hong Kong, Singapore, Japan, na South Korea dị ka nnukwu ihe egwu, na ndị njem na-esite ebe ndị a ga-anọpụ iche. Ka ọ dị ugbu a, etinyeghị iwu a. Maka akụkọ banyere njem njem kachasị ọhụrụ na Thailand, biko rụtụrụ aka na Weebụsaịtị ndị njem nlegharị anya nke Thailand.
Ka ọ dị ugbu a, enweghị mgbochi njem n'etiti mba ndị a na China.
Maka vidiyo na ndụmọdụ ndị ọzọ gbasara usoro nchebe megide COVID-19, gaa na Weebụsaịtị WHO.
Nkwupụta njem nlegharị anya nke Saint Lucia na Coronavirus COVID-19 Cases
Etihad Airways gbanwere na uzo nke US $ 506 ijeri